iphone unlock လုပ်ဖို.ကူညီမယ် ~ Free Mobile Sharing
Free Mobile Sharing
iphone unlock လုပ်ဖို.ကူညီမယ်
1:29 AM iOS Tutorials 1 comment
Iphone တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်Lock ဖြည်ရတာအနည်းငယ်ခက်ခဲလာတယ်။ခက်လားဆိုတော့လဲမခက်ပါဘူးဒီလိုလေးပါ။
ကျနော်တို.Iphone 3g/3gs ပုံမှန်အတိုင် Redsnow နဲ.J ပြီuးnlock လုပ်လို.မရတော့တာကိုတော့လက်တွေ.လုပ်နေကြသူတွေသိကြမှာပါ။အခုဟာကတော့ အဲလိုမရတာကို Jailbroken quick tool အကူအညီယူပြီး လုပ်နေကြအတိုင်းဆက်လုပ်ရမှာပါ။
ပထမဆုံး Jailbroken quick tool လေးဒေါင်းလိုက်ပါ http://www.mediafire.com/download.php?v3c6tusa697sra9 ဒုတိယကတော့ဒေါင်းရတာဖြည် installလုပ်ပေါနောက်
ဒါကတော့ redsnow exe လေးကိုဆွဲထည်.ရမဲ.နေရာ Chicken Baseband 2.1 ကိုclickပြီးဆွဲထည်.လိုက်ပါ အဲဒီမှာ redsnow ကပွင့်လာပါမယ်
ကျန်တာကတော့လုပ်နေကြတိုင်ဆက်လုပ်တော့မယ် extra>slect ipsw(6.1 ကိုဂျေမယ်ဆိုရင် 6.0 ထိ ထည်.လိုရပါတယ်)>back>jailbreak ပေါ့
အရေးကြီတာကတော့ မိမိ idevice ကမည်သည်. baseband ဖြစ်ပါစေ install ipad baseband ကိုအမှန်ချစ်ခဲ့ဖို.မမေ့ပါစေနဲ.ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ
ပြီသွားပြီဆိုရင်တော့ Iphone လေးဟာ tether Jailbreak ပဲရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် cydia ၀င်ပြီး search မှာ evasi0n 6.0-6.1 ကိုဆွဲလိုက်ရင်တော့ untether Jailbreak ရသွားပါပြီ။ဒါဆိုlockဖြည်ဖို.အတွက် ဘာဆွဲရမလဲ မိမိ ဖုန်းနဲ.ကိုက်ညီတဲ. Ultra snow ဆွဲလိုက်ရင်တော့ ဟော iphone လေးနဲ. ဟဲလိုလုပ်လို.ရပါပြီဗျာ။
(jailbroken quick tool run လို.မရပါက control panel>user account and family safety>user accounts တွင် change user account control settings ၀င်ပြီး never notification ထိဘားဆွဲချပါ)
ကူညီသော Nay Lin(s3 & p1 dualboot)
Ko Hein March 14, 2013 at 5:11 AM
2011 နောက်ပိုင်းထွက်တဲ. Device တွေမှာတော. မစမ်းစေချင်ဘူး အကိုမျိုး
Join MMF on Facebook
ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ်
ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ် ။ မည်သည့် Android ဗားရှင်းမဆို စာကိုမှန်ကန်စွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် :) အရမ်းကိုလ...
Myanmar Subtitle Font-DjjoeMan(MMF) - For PC
Myanmar Subtitle Movie ကြည့်ဖို့ရန် GOM Player နဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးပြုလုပ်ထားတဲ့ srt ဖိုင်လေးကိုထည့်ပြီး ကြည့်ကြမယ် ။ ထို srt ဖိုင်ေ...
Video Caller ID V1.11.06 For Android
Android စက်ရုပ်သမားတွေအတွက် တစ်ဘက်ကဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ Ringtone လုပ်နိုင်တဲ့ Video Caller ID အလန်း...
Samsung Version 4.3 ဖုန်းတွေအတွက် စမ်ဆောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်လေးကို ထည့်သွင်းနိူင်ပါပြီ
Samsung ရဲ့ Version 4.3 ဖုန်းတွေအတွက် ( စမ်ဆောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်လေးကို ထည့်သွင်းနိူင်ပါပြီ ) လိုအပ်သည့်ဆော့ဝဲများကို အော...
Samsung Galaxy Mega 6.3 - i9205 ကို Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာထည့်နည်း
Samsung Galaxy Mega 6.3 - i9205 ကို Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာထည့်ရအောင် Downloading..... ဝင်နည်း Odin3 V3.07 ဆော့ဝဲ၏ အနေအထား ...
Android Apps (158)
Android Games (62)
Android Tutorials (106)
Cydia tweaks (17)
Firmwares For Android (17)
iOS Firmwares (10)
iOS Games (30)
Myanmar apps (6)
myanmar fonts (8)
Rooting Guide (25)
Symbian Touch Tutorials (2)
Copyright © Free Mobile Sharing
Design by MMF